Saiye mushambadzi, musimboti wezvedu kuedza kuyedza kutaura kuti kutengesa, kushambadza, uye kushambadza matanho atakatora kufambisa tarisiro yedu parwendo rwevatengi. Vanotarisira vatengi vangangodaro vasingateedzere nzira yakachena kuburikidza nekushandurwa, zvakadaro, zvisinei nekuti zvinoshamisa sei chiitiko.
Instapage's yakazara inogadziriswa inovaka inoita kuti mabhizinesi agadzire anoshamisa, ekushandura-ane hushamwari mapeji ekumhara. Iine mamiriro echimiro ekugadzirisa, anopfuura zviuru zvishanu mafonti, uye mamirioni makumi matatu nematatu emifananidzo yekushanda nayo, iyo Instapage inomhara peji anovaka anotora marwadzo kunze kwekuburitsa pane-brand, shanduko-inoshamwaridzika mapeji ekumhara. Zvimiro zvinosanganisira:
Tsika Mafonti (Google & Typekit) - Tsika fonti zvinoita kuti iwe uratidze chako chiziviso chitupa. Instapage ndiyo chete chikuva chinopa mukana wekupfuura zviuru zvishanu + zveWebhu mafonti zvakapetwa kanokwana zana sarudzo dzemafonti kupfuura mamwe ese mapeji emapeji pamusika.
Master Akaundi - Nyore gadzirisa akawanda makasitoma maakaunzi nekuchinja pakati pemaakaundi ako pasina kupinda mukati kune akasiyana maakaundi. Wona rondedzero yeakaundi iwe yaunowana, chinja kuaccount yaunoda kushanda pairi, uye woona iyo account / muridzi ruzivo rweayo account iwe parizvino uri mune imwechete yakabatana interface.
Tags: peji rekumhara adagency kumhara peji chikuvamushandirapamwe wekumisa pejikutendeuka analyticsfomu muvakigoogle adwordsInstapagekusanganakumhara pejikuvhara peji anovakakumhara peji mienzanisokumhara peji mafomukumhara peji optimizationkumhara peji chikuvalead kubatwatungamira kutora mafomupopupsppc